သမီးအတွက် အဖေ့ဆီကစာ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, April 24, 2016 Life No comments
"သမီး ... ရော့ ..."
"ညည်းအဖေပေးခဲ့တဲ့စာ ... သူ့သမီးလေး အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်မယ်ဆိုရင် မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ညမှာ ဒီစာလေးပေးခဲ့ဖို့ အမေ့ကို မှာသွားတယ်"
"အော် ... အဖေရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်"
ကျွန်မစကားကြောင့် နှုတ်ဆိတ်သွားသည့် အမေ့ကို သတိထားလိုက်မိပါသည်။ အဝေးတစ်နေရာကို ငေးကြည့်နေသည့် အမေ ...။
ကျွန်မလည်း အလိုက်တသိပင် အမေ့နားက ထွက်လာခဲ့ပါသည်။
မနက်ဖြန် 'မောင်' နဲ့ လက်ထပ်ရတော့မည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးမှုတစ်ဝက် ၊ ကြောက်စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ အိပ်မရသောကြောင့် အဖေ့စာကို ဖွင့်ဖတ်လိုက်ပါသည်။
မနက်ဖြန်ဆိုရင် သမီးချစ်တဲ့သူကို သမီးလက်ထပ်ရတော့မယ်နော် ...။ အဖေ့ကို လွမ်းမနေပါနဲ့ သမီး။ မနက်ဖြန်ကစပြီး သမီးဘဝကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ သမီးမှာတာဝန်ရှိသွားပြီကွဲ့။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ့်သမီးကို အဖေ မှာစရာတွေရှိတယ် သမီး။
သမီးစာမေးပွဲအောင်တဲ့နေ့က အဖေ့ဆီက မုန့်ဖိုးတောင်းတာ သမီးမှတ်မိလား ...? အဖေ သမီးကို ၂ သောင်းပေးခဲ့တယ်လေ။ သမီးကတော့ထင်မှာပေါ့ ... အဖေပေးတာလို့။ အဲ့ဒါ သမီးအမေက သမီးကိုပေးဖို့ အဖေ့ကိုကြိုပေးထားတာပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အဖေ အလုပ်နားထားရတဲ့အချိန်လေ ... သမီးအမေက သူစုထားတဲ့အိမ်သုံးစရိတ်ထဲက သမီးလေးမုန့်ဖိုးတောင်းရင် အဖေပေးနိုင်အောင် အဖေ့အိတ်ထဲမှာ ကြိုထည့်ပေးထားတာပေါ့ကွယ် ...။
သမီး အိမ်ထောင်ကျပြီ။ သမီးခင်ပွန်းလည်း တခါတလေ အလုပ်အဆင်မပြေချိန် ၊ ငွေကြေးပြတ်တဲ့အချိန်တွေ ရှိလိမ့်မယ် သမီး။ သူစိတ်ရှုတ်နေလိမ့်မယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူအဆင်မပြေချိန် သူ့ဇနီးက သူ့ကိုအထင်သေး တန်ဖိုးမထားမှာ အရမ်းကြောက်တယ်။ * အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့နောက်မှာရပ်ပြီး သူ့ကိုအားပေးနေရမယ့်သူက သူ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ သမီးပဲကွဲ့ *။
* သမီးခင်ပွန်းကို သမီးသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ပြနိုင်တဲ့နည်းက သူ့ကို လေးစားတန်ဖိုးထားပေးခြင်းပဲ *။ သမီးတို့ စကားများရန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ သဘောထားကွဲ ငြင်းခုံနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သမီး သူ့ကို လေးစားမှုရှိတယ်ဆိုတာ သူသိစေရမယ် သမီး။
အဖေ သမီးအမေကို အော်ခဲ့တဲ့နေ့ကို သမီးမှတ်မိသေးလား ...? သမီးအမေ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ...? သူ တိတ်တိတ်နေခဲ့တယ်နော်။ သမီးအမေ အဖေ့ကို အော်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုရော မှတ်မိလား ...? အဖေ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ...? အဖေ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်လေ။သမီး ... တခါတလေ သမီးခင်ပွန်း စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာ သမီး နှုတ်ဆိတ်နေရမယ်။ * လူတစ်ယောက် ပူလောင်နေချိန်မှာ နောက်တစ်ယောက်က အေးနေမှရမယ် သမီး *။ နှစ်ယောက်စလုံးသာ တပြိုင်တည်းအော်နေကြမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြဿနာတွေ ကြီးပြီပေါ့ကွယ်။
* နောက်တစ်ခုက သမီးခင်ပွန်း ကြိုက်တတ်တဲ့အရာတွေကို မှတ်ထားရမယ် *။ သူပြောမှ လုပ်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သမီးက သူ့အတွက် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပေးထားရမယ် သမီး။
တခါတုန်းက အဖေ့ငယ်သူချင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အဖေ မုန့်အတူစားခဲ့ဖူးတယ်။ မတွေ့တာကြာတော့ စကားပြောရင်းနဲ့ပေါ့ကွာ။ အမှန်တော့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက အဖေ့ ငယ်ချစ်ဦးပေါ့။ ဈေးသွားရင်း ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ သမီးအမေလည်း အဖေတို့ကို မြင်သွားတယ်။ သမီးသာဆို ဘာလုပ်မလဲ ...? သမီးအမေက ဆိုင်ထဲခဏဝင်လာပြီး အဖေတို့ကို လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတစ်ယောက်တည်း ဈေးဆက်သွားတယ်။ ညနေ အဖေအိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း သူဘာမှမပြောဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း ညစာပြင်ပေး ၊ ထမင်းအတူစားကြရင်း စကားစမြည်ပြောကြပေါ့။ မနက်ကကိစ္စကို တစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့ဘူးသမီး။ အဖေထင်ထားတာက မိန်းမတို့ထုံးစံအတိုင်း သူ အဖေ့ကို ပြဿနာရှာတော့မယ်ထင်ခဲ့တာ ... အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ... အဖေ ဘယ်သူနဲ့ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့ ဘာပြောပြော သမီးအမေ့ကို အကုန်ပြောပြခဲ့တယ်။ သူစိမ်းအမျိုးသမီးတွေကိုလည်း စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားခဲ့ဘူး သမီး။ *ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ယုံကြည်မှုစည်းနဲ့ ချည်ထားတတ်ရတယ် သမီး *။
သမီး ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက အချစ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ခဲ့တယ်နော်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးတွေလည်း သမီးကြည့်တယ်နော်။ မေ့လိုက်တော့ သမီး။ သမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးလမ်းက ဒီဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို ဖြောင့်ဖြူးနေမယ်လို့ မမျှော်လင့်နဲ့။ * ဘဝဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် မဟုတ်ဘူး သမီး *။
အဖေနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ... အဖေတို့ သမီးကို ဘယ်လိုကြီးပြင်းအောင်မွေးခဲ့ရလဲဆိုတာ သမီးမှတ်မိလား ...?
အဖေတို့ လက်ထပ်ပြီးတော့ အဖေလည်း အလုပ်လုပ်တယ်။ သမီးအမေလည်း အလုပ်လုပ်ရတယ်။ သမီးအမေက အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပါ ထပ်လုပ်တော့ အိမ်ကို ည ၈ နာရီမှ ပြန်ရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးအမေက အဖေ့ကို ညစာပြင်ဆင်ပေးဖို့ ဘယ်တော့မှ မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး သမီး။ သမီးကြောင့်လည်း သမီးခင်ပွန်းရဲ့ မနက်စာ ၊ ညစာတွေ မပျက်ကွက်ပါစေနဲ့။ *ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူတတ်ရမယ် သမီး*။
ဖေဖေ့သမီးလေး ဇနီးကောင်းတစ်ယောက် ပီသပါစေကွယ်။
အဖေ့စာကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့လက်ထပ်ပွဲမှာ အဖေ မရှိနိုင်တော့ပေမယ့် ကျွန်မ ဝမ်းမနည်းတော့ပါဘူး။ ကျွန်မဘဝအတွက် အဖေရေးပေးခဲ့တဲ့စာလေးက ကျွန်မဘေးနားမှာ အဖေအမြဲနေပေးပြီး သတိပေးဆုံးမနေသလိုပါပဲ အဖေရယ် ...။
''မြရေ ... ဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါအုံးကွာ"
မင်္ဂလာပွဲကြွရောက်အားပေးသူများကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနှုတ်ဆက်နေသည့် မိခင် နှစ်ဦး ...။
ကျွန်မတို့ အဖေတွေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ...။
"မောင် .. မြကို လက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ မြက မောင့်လက်တွဲဖော်ဖြစ်သွားပြီ။ မောင်တို့ဘဝသစ်ကို အတူတူလျှောက်လှမ်းဖို့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက်တွေ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းရှိနေရမယ်နော် ... မြ"
ကျွန်မ မောင့်ကို ပြုံးပြလိုက်ပါသည်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ဖေဖေ့စာလေးကိုလည်း မောင့်လက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတော့သည်။
ဘဝသစ်တစ်ခုရဲ့ စာမျက်နှာ - ၁ စဖွင့်သည့်နေ့ ...
"မောင်ရေ ... ညနေ အလုပ်ကပြန်လာရင် ဒီစာရွက်လေး ပလတ်စတစ်လောင်းခဲ့ပါနော်"
Coffee Chit Thu's photo.